EJamani: Iminyaka emibini entolongweni ngenxa yezatifikethi zomgunyathi zokugonya i-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » EJamani: Iminyaka emibini entolongweni ngenxa yezatifikethi zomgunyathi zokugonya i-COVID-19
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
EJamani: Iminyaka emibini entolongweni ngenxa yezatifikethi zomgunyathi zokugonya i-COVID-19.
Umphathiswa wezempilo ophumayo eJamani uJens Spahn ulumkise “ngolwesine” losulelo lwe-COVID-19 oluya ebusika, kwaye wathi i-spike yangoku kumanani amatyala - afikelele kwinqanaba eliphezulu leveki ngoMvulo ukusukela oko kwaqala ubhubhani - bebeqhutywa. ngabantu abangagonywanga.
IJamani ilungiselela uyilo lomthetho omtsha ukwandisa amanyathelo e-coronavirus kulo nyaka uzayo.
Umthetho omtsha uza kuqulatha izohlwayo eziqatha kuye nabani na obanjwe esenza into ebizwa ngokuba 'yipassports zokugonya'.
Umthetho okhoyo ngoku waseJamani woKhuseleko loSulelo uphelelwa nge-25 kaNovemba, ngoko ke umthetho omtsha uya kwaziswa kwaye uvotelwe ngaphambi kwaloo mhla.
Umthetho okhoyo ngoku waseJamani woKhuseleko loSulelo uphelelwa nge-25 kaNovemba, kwaye abezomthetho belizwe kuthiwa balungiselela umthetho omtsha wokwandisa amanyathelo okulwa ne-COVID-19 ukuya kutsho ngo-2022.
Iinkokeli zopolitiko ezivela Jemani Urhulumente womanyano ekunokwenzeka ukuba uyile umthetho omtsha owandisa amanyathelo e-coronavirus yelizwe kulo nyaka uzayo kwaye ucebise izohlwayo eziqatha, kubandakanya ixesha lokuvalelwa entolongweni, kuye nabani na owenza i-COVID-19. isatifikethi sokugonyas, eqhele ukubizwa njenge 'iipasipoti zokugonya'.
Lo mthetho mtsha umthetho uya kubanezohlwayo zemali ezinkulu kunye/okanye ukuya kutsho kwiminyaka emibini entolongweni yabantu ababanjwe besenza izatifikethi zokugonya ngomgunyathi.
Umthetho omtsha unokungeniswa kwaye uvotelwe ngaphambi kwe-25 kaNovemba - umhla umthetho welizwe we-COVID-19 umiselwe ukuphelelwa.
Jemani Umphathiswa wezempilo ophumayo uJens Spahn ulumkise “ngoliza lesine” losulelo lwe-COVID-19 oluya ebusika, kwaye wathi i-spike yangoku kumanani amatyala - athe afikelela kwinqanaba eliphezulu leveki ngoMvulo ukusukela oko kwaqala ubhubhane - eqhutywa ngabangagonywanga.
Ukuxoxisana nomthetho omtsha ukususela oko kwahlala amalungu e-SDP yephiko lasekhohlo, i-Free Democrats kunye ne-Greens, abaye bavalelwa kwiingxoxo ezijolise ekwenzeni urhulumente wobumbano ukususela kunyulo lwe-federal kaSeptemba.
Jemani isebenza inkqubo enamanqanaba amabini yoqinisekiso lwesitofu sokugonya ukungena kwiindawo ezininzi zoluntu. Abantu abagonyiweyo kunye nabo banokugonywa kwendalo ngenxa yosulelo lwangaphambili banikwa eyona nkululeko, ngelixa abo banokungqina uvavanyo olubi baxhomekeke kwizithintelo ezingqongqo, kwaye bayafuneka kwamanye amazwe ukuba bahlale begqunywe ngaphakathi.
Kwamanye amazwe aseJamani, amashishini anokwala ukungena kwabo bangagonywanga, kwanabo banovavanyo olubi.
Amapolisa azabalazele ukunqanda ukurhweba ngomgunyathi iziqinisekiso okoko kwaqaliswa ukupasiswa ngoJuni, kwaza kwasekwa iqela elikhethekileyo lokuphelisa ubuqhophololo.
Inkqubo ye-EU yoqinisekiso lwedijithali - apho izatifikethi zomntu ngamnye ziskenwa kwaye zifaniswe ngokuchasene nezitshixo zabucala ezigcinwe zizibhedlele kunye namaziko okhathalelo lwempilo - yenza ukukhohlisa kube nzima ngakumbi, kodwa kungenzeki.